ဒီနှစ်နွေမှာယူနိက်တက်ကလုပ်မယ့်ထိပ်တန်းခေါ်ယူမှု၄ခုကချန်ပီယံတွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်မလား? – FBV SPORT NEWS
ဒီနှစ်နွေမှာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းက ထိပ်တန်းခေါ်ယူမှု ၄ခုလုပ်ဖို့ရှိနေပြီး ဒီခေါ်ယူမှုတွေဟာ ချန်ပီယံချဲလ်ဆီးနဲ့ ခါးသီးပြိုင်ဖက်မန်စီးတီးအသင်းတို့ကို ယှဉ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယူရိုပါလိဂ်ဖလားကို လက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ နည်းပြဆိုလ်းရှားနဲ့ပက်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ဂလေဇာကတော့ သူကြိုးဆွဲရာ ကမယ့် ရုပ်သေးရုပ်လေးလိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုလ်းရှားကို အသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေစေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ မက်ထရို သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။
ယူနိက်တက်တို့ဟာ ဖလားလက်မဲ့ ၄ရာသီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အောင်မြင်မှုတွေမဖြစ်မနေ ပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်ဆို ဒီနှစ်နွေမှာ အရင်နှစ်တွေလို နှာစေးမနေပဲ ခေါ်သင့်ခေါ်ထိုက်တဲ့ ကစားသမား၄နေရာကိုတော့ခေါ်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မက်ထရိုသတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ယူနိက်တက်တို့ကို ဂလေဇာက ပေါင်သန်း၁၅၀ဘတ်ဂျက်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့လိုငွေတွေကို ကစားသမား ၈ယောက်လောက်အထိရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေကနေ ဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ယူနိက်တက်ဟာ လက်ရှိမှာ ဒေါ့မွန်အသင်းကဆန်ချိုကို ချိတ်ဆက်နေပြီး ပေါင်သန်း၇၇သန်းလောက်အသုံးပြရင် ရနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ လတ်တလောအပြောင်းအရွေ့သတင်းတွေအရ စပါးကကိန်းကို ဈေးကြီးပေးပြီးခေါ်ယူမှုထက်ဆန်ချိုကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားဖို့ ယူနိက်တက်ဘက်က ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းကနောက်ခံလူRaphael Varane and ဗီလာရီးရဲက Pau Torres ၂ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို အရခေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
သူတို့၂ယောက်ရဲ့တန်ကြေးက ပေါင်သန်း70လောက်သုံးရမှာဖြစ်ပြီး ဂလေဇာကချပေးထားတဲ့ငွေဟာ ပေါင်သန်း၁၅၀သာရှိလို့ ကစားသမားတွေရောင်းချသွားဖို့ရှိနေတာပါ။ ၏
ဒါ့အပြင် ကွင်းလယ်မှာပေါ့ဘာဆက်ရှိမရှိက မသေချာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီး ပေါ့ဘာဘက်က တစ်ပတ်လုပ်ခလစာပေါင်၅သိန်းမပေးရင် အသင်းကထွက်ခွာဖွယ်ရှိနေလို့ ဝက်စ်ဟမ်’အသင်းက ဒီကလန်ရိုက်ကိုလည်း ယူနိက်တက်တို့ကချိတ်ဆက်နေပါတယ်။
လက်ရှိအပြောင်းအရွေ့သတင်းထွက်နေတဲ့ကစားသမားအားလုံးယူနိက်တက်မှာကစားချင်တယ်ဆိုတာကို မီးစိမ်းပြထားပြီးသားကစားသမားတွေချည်းဖြစ်ပြီး ယူနိက်တက်တို့ဘက်ကသာ တရားဝင် ကမ်းလှမ်းမှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေတာပါ။
ဒီ၃ယောက်အပြင် ယူနိက်တက်တို့ရဲ့တချိန်က ဂန္တဝင်ကြီး ရော်နယ်ဒိုနဲ့ဆိုလ်းရှားကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ထားပြီးဖြစ်ပြီး ယူနိက်တက်တို့ဘက်က တရားဝင်ကမ်းလှမ်းဖို့သာလိုတော့တဲ့အခြေအနေပါ။ ရိုနယ်ဒိုကတော့ ပထမပိုင်းသတင်းတွေမှာ ငယ်ဘဝအသင်းလေးကိုပဲပြန်တော့မယ်လို့ဆိုပေမယ့် တချိန်ကအောင်မြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းကိုပြန်လာလိုတဲ့အနေအထားရှိနေတဲ့အတွက် ယူနိက်တက်တို့ဟာ ဒီခေါ်ယူမှု ၄ခုကို ဒီနှစ်နွေမှာ အဓိကပစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနာမ်ည်ကြီးထမင်းငတ်ဖြစ်နေတဲ့ ယူနိက်တက်တို့အနေနဲ့ ဒီနှစ်နွေမှာ ပေးထားတဲ့ကတိတွေမတည်ခဲ့ရင် ဂလေဇာကို ဆန္ဒပြတာတွေဟာလည်း ပိုမိုဆိုးဝါးလာတဲ့အနေအထားရောက်လာမှာဖြစ်ပြီး ဒီနွေမှာတော့ ဂလေဇာဟာပရိတ်သတ်တွေတောင်းဆိုထားတာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်အနေအထားတော့ရှိနေပါတယ်။
ဒီထိပ်တန်းခေါ်မှု လေးခုသာတစ်ကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ယူနိက်တက်တို့ဟာ ဖလားအိမ်မက်တွေကို ပြန်အသက်သွင်းကောင်းသွင်းနိုင်မယ်လို့ အားကစားကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ယူနိက်တက်ရဲ့လူသစ်ခေါ်ရေးစီမံချက်ဟာ ပရိတ်သတ်တွေကို ပျားရည်နဲ့ဝမ်းချတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်ကယ်ထိပ်တန်းခေါ်ယူမှုတွေလိုအပ်တဲ့ခေါ်ယူမှုတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
ယူနက်တက်ဂန္တဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ်စခိုးကတော့ ကွင်းလယ်ပိုင်းနဲ့နောက်တန်းကို သေချာပေါက်မဖြစ်မနေခေါ်ယူရမယ်လို့ အကြံပေးထားပါတယ်။
မန်ဖန်တွေရောဒီ၄ယောက်နဲ့ဆို ယူနိက်တက်ဟာချန်ပီယံတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်ပီလို့ထင်ပါသလား????မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အမြင်ကို ကွန့်မန်းမှာ မျှဝေသွားလို့ရပါတယ်နော်,
စပိန်မှာခြေစွမ်းပြလို့ လာလီဂါကလပ်တွေ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ ပယ်လစ်စထရီရဲ့Skillများ(ရုပ်/သံ)